Elinye igama lamanethiwekhi okuxhumana amaningi ase-multiservice yi-NGN, okuthi, ngesiNgisi, izwakala Amanethiwekhi Omusha Omusha noma Inethiwekhi Yomumo Olandelayo. Amanethiwekhi wokukhulumisana omphakathi ahlanganisa amanethiwekhi wesizukulwane esisha. Ingqikithi yamanethiwekhi e-IP asekela uhlu oluyingxenye noma oluphelele lwezwi, ama-multimedia kanye nedatha kakhulu edingekayo. Amanethiwekhi omxhumanisi wokuxhumana asebenza ngokuvumelana nokuxhumana kwezinsizakalo zokuxhumana.
Yiziphi izidingo zokuqala kwe-NGN?
Ngaphambilini, ulwazi oluhlukahlukene lwadluliselwa ngamanethiwekhi okuxhumana omnyango, njengenethiwekhi yedatha, i- telegraph, ucingo, njalonjalo. Ngokushesha kwakukhona umqondo wokuhlanganisa zonke izingcingo zeminyango eyodwa, okuthiwa yi-ISDN. Kodwa-ke, ngokushesha wahluleka. Futhi kwakukhona izizathu ezimbalwa zalokhu: izindleko eziphezulu ze-ISDN imishini, ukuvela kwezinsizakalo ezintsha ezifunwa, ukuthuthukiswa kwezinethiwekhi ze-IP. Ngakho-ke, kwakukhona inethiwekhi entsha - NGN, eyakhelwe ngesisekelo seprotocol ye-IP.
Yiziphi izimiso zokuxhumana amanethiwekhi amaningi?
Ulwazi oludluliselwa kumanethiwekhi amanethiwekhi alandelayo luhlukaniswe isignali kanye nohlobo lomsebenzisi ngohlobo lwalo. Owokuqala unikeza izinsizakalo ezithile futhi uqinisekisa ukushintshwa kokubhaliselwa okungaphazamiseki. Umsebenzisi uqukethe ulwazi oluwusizo kumbhalisi (ividiyo, izwi, idatha, njalonjalo).
I-NGN isekelwe ubuchwepheshe be-MPLS, kanye ne-Inthanethi. Namuhla, izindlela ezilandelayo zokwakhiwa kwe-NGN ziyahlukaniswa:
1. H.323 yiyona yokuqala yezinhlobo ezikhona manje. Ihlinzekwa njengedatha elayishwayo ngamanethiwekhi e-ISDN.
2. I-SIP ihlukile kwezobuchwepheshe bokuthutha. I-H.323 ithathe indawo engu-H.323 lapho kubonakala izinkinga eziningana. I-SIP inikeza amasevisi we-VoIP.
3. I-MGCP idiliza lezi zindlela, zihlukanise zibe ngamabhuloki amathathu. Lesi Sango Lokubonisa - sidlulisela ulwazi lokusayina, iMedia Gateway - idlulisa idatha yomsebenzisi, i-Call Agent - iqukethe ukuhlakanipha kwesango.
Lezi zindlela zingasetshenziswa kokubili ngokuhlanganyela nangokuhlukana.
Idivayisi yeSoftswitch ilawula izikhathi ze-VoIP, inikeza uxhumano lwamanethiwekhi akhona nama-PSTN anamuhla. Umsebenzi we-Gatekeeper, owenziwa yi-Softswitch yase-H323, futhi umsebenzi we-Call Agent wenza le divayisi ibe yanamuhla.
I-softswitch ye-MGCF yenza umsebenzi wesiteshi nokushintsha kwepakethe.
Kuyini i-NGN okwamanje?
Ngokuqhubekayo, opharetha bezokuxhumana bashintsha ukushintshwa kwepakethe. Ubuchwepheshe obusha buvumela ukuguqulwa okunamandla kusuka kumanethiwekhi esizukulwaneni sokuqala kuya ezanamuhla, ukuqinisekisa ukuqhutshwa okuqhubekayo kunoma iyiphi inethiwekhi yocingo. Ngakho, ukuze singaguquki ngokuphelele isakhiwo sonke senethiwekhi, kudingeka sisebenzise lesi simiso sephuzu lokushintsha. Izidingo zokudluliselwa ku-NGN:
Ubani umenzi wemishini?
Abakhiqizi be-NGN yizinkampani ezilandelayo: Cisco Systems, Siemens, Alcatel-Lucent, Huawei, Avaya, njll. ERussia - MFI Soft.
Kukhona namanethiwekhi wekhebula ama-multiservice.
Inethiwekhi yomphakathi ivumela ithelevishini yekhebula eliningi, iziteshi zokubhekwa kwevidiyo, i-intanethi enkulu, ukudluliswa kwedatha ye-Ethernet, ukuqoqwa kwedatha kanye nokuphathwa kwamadivaysi okulinganisa izinsiza.
Ama-cable network ama-cable avumela iziteshi zokusakaza kunoma iyiphi ingxenye yezwe, isifunda noma idolobha. Ngakho-ke, lisetshenziselwa ama-cable operators amaningi.
Izinguquko ezintsha kusuka kwezobuchwepheshe obudala kuya kwezobuchwepheshe zanamuhla zenza kube lula ukudala into ephelele, entsha ngaphandle kokulahlekelwa izinsiza nemishini ekhona. Ngesikhathi esifanayo, imisebenzi emidala ihlala, ebalulekile kulabo abasebenzisa i-telecom.
Amanethiwekhi okukhulumisana omphakathi angaphezu kwesisodwa azosijabulisa ngokuthile okusha, ngoba banokuningi okuzokwenza. Yebo, kuze kube yimanje, i-NGN inikezela zonke izinsizakalo zocingo oluphambili kunazo zonke noma inethiwekhi yekhebula elinganikeza.
Zrazy inyama French ne amaqanda ukugcwaliswa
Lymph node ekhanda: kuphi, kungani futhi kanjani?
Ukususwa kwe-callosities ne-laser: ukubuyekezwa, imiphumela, isithombe